Kathamandu Mahanagarpalika | जनदिशा
Tag: Kathamandu Mahanagarpalika
बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कार्वाही शुरु
janadisha February 22, 2019	No Comments Kathamandu Mahanagarpalikasahakari
– शर्मिला पाठक काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कार्वाही शुरु गरेको छ । कामपाले विगत दुई हप्तादेखि सबै सहकारीमा अनुगमन गरी नियम उल्लङ्घन गर्ने र बचतकर्तालाई ठगी गर्ने सहकारीलाई कार्वाही अघि बढाएको हो । कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख नबराज ढकालका अनुसार अनुगमनका क्रममा अहिले सम्म १५…
View More बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कार्वाही शुरु
स्थानीय निकाय ठप्प हुँदा सेवाग्राही समस्यामा
janadisha December 24, 2018	No Comments kathamanduKathamandu Mahanagarpalika
काठमाडौँ । क्षेत्रपाटीका ३० वर्षीय देवीप्रसाद पाठक घरको नक्शा पास गर्न भनी महानगरपालिका आइपुगेका छन् । तर देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा गरेको आन्दोलनका कारण काम नै नभई उनी फर्किएका छन् । “आन्दोलन भन्ने त थाहा थियो, तर पनि काम हुन्छ कि भनेर आएको, काम नै भएन्”,…
View More स्थानीय निकाय ठप्प हुँदा सेवाग्राही समस्यामा
‘शान्तिमण्डल’ मुआब्जा विवाद केन्द्र सरकारलाई मिलाउन माग
janadisha October 28, 2018	No Comments Kathamandu Mahanagarpalika
काठमाडौँ । ‘तीनकुने शान्तिमण्डल’ स्थानीयवासीलाई दिइने मुआब्जा विवाद केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘शान्तिमण्डल’ स्थानीयवासीलाई दिइने मुआब्जा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जाको कुरा कामपाले नभई केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको भनाइ छ । “तीन वर्षअघि नै नमूना तयार गरी काम अघि…
View More ‘शान्तिमण्डल’ मुआब्जा विवाद केन्द्र सरकारलाई मिलाउन माग
होशियार ! काठमाडौँका ९७ प्रतिशत बाँदरमा एड्स र क्यान्सर,मानिसमा सर्ने सम्भावन बढी
janadisha October 28, 2018	No Comments cancerHIVKathamandu Mahanagarpalika
काठमाडौ । पशुपति र स्वयम्भू मन्दिर वरपर बस्ने ९७ प्रतिशत बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी एड्सको संक्रमण भएको पाइएको छ । केही समयअघि अमेरिकाको वासिङ्टन विश्वविद्यालयले पशुपति र स्वयम्भूका ३९ बाँदरमा गरेको अनुसन्धानले यस्तो तथ्य देखाएको हो । ३९ मध्ये ३७ बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभीरएड्सको संक्रमण देखिएको थियो । विश्वविद्यालयले पहिलो…
View More होशियार ! काठमाडौँका ९७ प्रतिशत बाँदरमा एड्स र क्यान्सर,मानिसमा सर्ने सम्भावन बढी
जनदिशा October 3, 2018	No Comments Kathamandu Mahanagarpalika
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनका लागि एक हजार ८०० स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले कामपाभित्र ३५० स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गरिसकेको छ । ती क्यामेराले अपुग भएपछि कामपाले थप क्यामेरा जडान गर्न लागेको हो । प्रहरीले उपत्यकामा करीब ५०० भन्दा…
View More अठार सय स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान